ओली–प्रचण्ड आज पनि छलफलमा, के निस्किएला त समाधान ?
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आज पनि छलफलमा जुटेका छन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि भन्दै दुई अध्यक्ष छलफलमा जुटेका हुन् । बालुवाटार स्रोतले जनाएअनुसार दुई अध्यक्षबीच केहीबेर अघिदेखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल सुरु भएको छ ।
लामो समयको संवादहिनतालाई तोड्दै ओली र प्रचण्डबीच बिहिबार झण्डै चार घण्टासम्म छलफल चलेको थियो । बिहिबारको छलफल सकारात्मक उन्मुख भएसँगै दुई अध्यक्ष आज पुनः छलफलमा जुटेका हुन् ।
नेकपा स्रोतले जनाएअनुसार विवाद समाधानको लागि ओलीले दाहालसँग ३ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन् । जहाँ उनले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई थप अधिकार दिने कुरा उल्लेख छ । साथै सरकार सञ्चालनसम्बन्धमा पनि उनले केहि विषय फेरबदल गर्न सकिने कुरा राखेका छन् ।
यसअघि बुधबार एक टेलिभिजनसँगको अन्तरवार्ताको क्रममा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीले पाँच दिनभित्रै नेकपाको संकट समाधान हुने बताएका थिए । जसको भोलीपल्ट देखि नै दुई अध्यक्षबीच वार्ता सुरु भएको हो ।
गत साउन २१ मा अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बेग्लै पत्रकारको भेला गरेसँगै दुई अध्यक्षबीचको संवाद रोकिएको थियो । त्यसयताका समयमा ओलीले छलफलका लागि रुची नदेखाएको चर्चा भएको थियो ।
स्थायी समिति बैठकका बीच प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीको राजीनामा मागिएसँगै नकेपाभित्र विवाद चुलिएको थियो । नेकपाभित्र बहुमत पक्षधर ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने अडानमा छन् भने ओली कुनै हालतमा कुनै पदबाट राजीनामा नदिने अडानमा छन् ।
ओली र प्रचण्डबीच ९ दिन पछि संवाद, के निस्किएलता त समाधान ?
ओली–प्रचण्ड वार्ता विवाद समाधान उन्मुख
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन : यी हुन् नफेरिने पक्का भएका ७ मन्त्री
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको तयारीमा…
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन किन रोकियो ?
काठमाडौं । आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आकस्मिक रुपमा बोलाएको…
स्पेनमा १५ वर्षीया नेपाली किशोरीको मृत्यु
पिसिआर रिपोर्ट सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिन प्रयोगशालालाई निर्देशन
सौरहामा पर्यटकलाई ३० प्रतिशतसम्म छुट दिने घोषणा
सिंहदरबारभित्र मान्छे नमरी कोरोना नियन्त्रणमा आउँदैन : सचिव श्रेष्ठ